Xasan Sheikh & Siyaasiyiinta Beesha Mudulood oo ka kulmay Xiisada siyaasadeed ee dalka ka jirta | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xasan Sheikh & Siyaasiyiinta Beesha Mudulood oo ka kulmay Xiisada siyaasadeed ee...
Xasan Sheikh & Siyaasiyiinta Beesha Mudulood oo ka kulmay Xiisada siyaasadeed ee dalka ka jirta
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulan la qaatay Siyaasiyiin kala duwan, kuwaasoo lagu waddo in ay dhawaan ay bilaabaan xalinta dhibaatada maanta ka taagan Soomaaliya ee ku aadan khilaafka.
Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu sheegay in uu gurigiisa uu ku qaabilay Siyaasiyiintaasi oo qaarkood ay xildhibaano yihiin ,kuwo horay Madax u soo noqdeen iyo kuwo hadda ku jira hadda dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in uu bogaadiyay dadaallada ay waddaan , islamarkaana uu rajeynaayo in ay soo Afjari doonaan Khilaafka iyo dhibka maanta ka taagan Soomaaliya.
Xubnaha uu la kulmay oo uu ugu yeeray Xasan Sheekh Maxamuud Siyaasiyiinta Muqdisho, waxaa ka mid ahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi, Ra’iisul wasaarihii hore Nuur Cadde Senetor Muuse Suudi iyo Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Qaranka Ismaaciil Macalin Muuse.
“Waxaa maanta igu soo booqday gurigeyga siyaasiyiin waaweyn oo reer Muqdisho ah Waxaana ka wada sheegakeysannay danta guud ee dalka iyo dadka. Waan uga mahadcelinayaa dadaallada ay ugu jiraan xal u helidda mashaakilaadka maanta taagan qaarkood” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud